Bubble Shooter em emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
ပူဖောင်းသေနတ်သမား လျင်မြန်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များလိုအပ်သော Android နှင့် iOS အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းဟာအရောင်အသွေးစုံလင်ပြီးကြည့်ရတာအလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုစစ်ဆေး။ ဤစွဲလမ်းစေသောဂိမ်းကိုကစားရန်သင်ယူသည်
Bubble Shooter ကစားနည်း 🙂
Bubble Shooter ကိုအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့ကစားရန်၊ သင်သာပြုလုပ်ရမည် ဤညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာပါ:
ခြေလှမ်း 2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သင်သာရန်ရှိသည် play ကိုနှိပ်ပါ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရပြီးတာနဲ့သင်အဆင့်အထိနိုင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း5အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်.
4 အဆင့်။ ဂိမ်းထဲမှာရှိတဲ့ပူဖောင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
Bubble Shooter ဆိုတာဘာလဲ။ 🤓
Bubble Shooter သည်တစ်ခုဖြစ်သည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဂိမ်းများ အကျော်ကြားဆုံးပူဖောင်းသေနတ်သမားသည်ကစားရလွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပြောနိုင်ပါတယ် ဒါဟာအရောအနှောဖြစ်ပါတယ် အခြား "အလွန်ကျော်ကြားတဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုTetris" နှင့် "လေးခုချိတ်ဆက်ပါ"Bubble Shooter သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
ရည်မှန်းချက် Bubble Shooter သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရနိုင်သမျှများများစုဆောင်းပါ ရောင်စုံပူဖောင်းများဖျက်ဆီး။ ပူဖောင်းများကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရန်အတွက်တူညီသောအရောင်အနည်းဆုံးပူဖောင်း ၃ လုံးကိုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
၏သမိုင်း စည်ဖေါင်း သေနတ်သမား 🙂
ဒါဟာပျော်စရာကောင်းပြီးလူကြိုက်များတယ် ပဟေgameိဂိမ်း ငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောအချိန်တွင်ကစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်၎င်း၏အမြစ်များသည်ထွက်လာသည့်ဂိမ်းတွင်ရှိသည်ကိုမသိကြပါ 80 အတွက်ဂျပန် Arcadeနှင့်၎င်းကိုမူလက Bubble Bobble ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာ 90 သည်အထိအနောက်နိုင်ငံများသို့ရောက်ပေမယ့်မူရင်းဂိမ်းကနေအပြောင်းအလဲတချို့နှင့်အတူသာဖြစ်ခဲ့သည်။
ပူဖောင်း ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် Japan Arcade တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုတွင်နဂါးနှစ်ကောင်ဖြစ်သော Bub နှင့် Bob တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် အဖြစ်အပျက်အချို့ဒြပ်စင်နှင့်အတူ ပဟေlesိများနှင့်ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်စင်မှာအကြောင်းအရာအလိုက်။
အချိန်ကာလနှင့်အညီဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂျပန်ကာတွန်းနှင့်ဆင်တူသည် juego ဖြစ်ခြင်းများအတွက်စျေးကွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ် ပျော်စရာများနှင့်စွဲလမ်းArcade အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခု။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အယူအဆကိုအသုံးပြုသောပထမဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် "မျိုးစုံအဆုံးသတ်"ပိုမိုခေတ်မီသောဂိမ်းများတွင်သာလူကြိုက်များလာနိုင်သည်။ ကစားသမား၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ စွန့်စားမှု၏အဆုံးသည်ကွဲပြားနိုင်သည်
အစပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာသာအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ 1994 အတွက်, ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီ Taito မှကျော်ကြားသောဇာတ်ကောင်များကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ခေါင်းစဉ်အသစ်ဖြင့်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီအချိန်ကိုခေါ် Puzzle Bubble, နှင့်ပဟေpureိပဟေmechanိစက်ပြင်နှင့်အတူ။ အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခုချက်ချင်း hit ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီဗားရှင်းအသစ်နဲ့အတူသူတို့ဟာအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ခွင့်ပြုရန်ရန်သူများနှင့်အတူပလက်ဖောင်းဘေးဖယ်ထား ရမှတ်များနှင့်တူညီသောအရောင်တူသောအပိုင်းအစများ၏ပဟေgameိဂိမ်း ဒါပေမယ့် Tetris နဲ့မတူပဲအချိန်ရဲ့နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုတစ်ခု၊ အပိုင်းပိုင်းအောက်ခြေကနေလာ၏, Bub နှင့် Bob တို့ကဖြန့်ချိ။
မျက်နှာပြင်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြည့်ပါက Game Over ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရေပူဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပစ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာဂန္တ ၀ င်ဂိမ်းရဲ့လူကြမ်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပါတယ်။
ကစားသမားနှစ်ယောက် သူတို့ကအတူတကွပူးပေါင်းပြီးရမှတ်တွေရနိုင်တယ်။ စိတ်ကူးသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်၏ဇာတ်ကောင်များကိုမျိုးဆက်သစ်ကစားသမားများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်ခဲ့တယ်။
Bubble Shooter အမျိုးအစားများ ⭐
ဤကျော်ကြားသောဂိမ်း၏ဗားရှင်း ၃၀ ကျော်ရှိသည်။ သို့သော်ဗွီဒီယိုဂိမ်းစက်အတွက်ဖန်တီးရန်အသင့်တော်ဆုံးဂိမ်းများမှာ -
Ultra Bust-A-Move နှင့် စကားတာ Bobble Live Xbox console ကိုအဘို့။
တွေဆီကနေ -A-Move အဆိုပါ PSP များအတွက် Deluxe ။
Puzzle Bobble 3D Nintendo (3DS) အတွက်ဖြစ်သည်။
Bobble အွန်လိုင်း Puzzle PC အတွက်သီးသန့်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ Bust-A-Move ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးဟာ clone ပါ ပူဖောင်းသေနတ်သမား။
ပူဖောင်းသေနတ်သမားတစ် ဦး ရှိပါတယ် ရိုးရိုးလေးကြည့်ပါ တိုက်ရိုက်အဆိုပြုချက်ကိုအတူ။ ဤအချိန်တွင်ဂိမ်းသည်၎င်းမှုတ်သွင်းထားသည့်စီးရီး၏ဂန္ထဝင်ဒြပ်စင်များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်မဟုတ်ပါ၊ စွဲလမ်းဂိမ်း ဒါကလူကြိုက်များစေခဲ့သည်။
ဒီဂိမ်းက spheres တွေကိုမြှားတွေနဲ့ပစ်လိုက်မယ်၊ သူတို့ရဲ့အရောင်တွေနဲ့ point marker ကိုကိုက်တယ်။ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကဒါပဲ Bubble Shooter အခမဲ့ဖြစ်သည် browser နှင့်မိုဘိုင်း application များတွင်မူရင်းကိုဂိမ်းစက်သို့မဟုတ် PC အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Bubble Shooter နည်းဥပဒေများ
သင့်ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက် Bubble Shooter ထဲမှာပါ အားလုံးအရောင်ဘောလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါ မျက်နှာပြင်ကနေသေနတ်နှင့်အတူရောင်စုံဘောလုံးရိုက်ကူး။
သတိရရမယ် တူညီသောအရောင်အနည်းဆုံးဘောလုံး ၃ ခုနှင့်ကိုက်ညီပါ ဒါတွေအားလုံးပေါက်ကွဲသွားတာကြောင့်ဘောလုံးအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ၏အရောင် စည်ထဲကလာမယ့်ဘောလုံးကျပန်းဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်အသံကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင်သေနတ်နဲ့ပစ်ချင်တဲ့နေရာမှာမျက်နှာပြင်ကိုထိရမယ်၊ ပစ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးရဲ့အရောင်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိခြင်းအပြင် ကျင်လည်ခြင်း မည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းသည်ထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း။ မှားယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းသော ဦး တည်ချက်ဖြင့်ရည်ရွယ်ခြင်းသည်ဆိုးဝါးသောရလဒ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
သတိထားရမယ် ရောင်စုံဘောလုံးတန်းများသည်ချောက်ဆီသို့ရောက်လျှင်သင်ရှုံးသည် ဂိမ်းနှင့်သင်ကျော်စတင်ရပါမည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ဂိမ်းကိုအပြီးသတ်ရန်ဘောလုံးအနည်းငယ်ကျန်ပါကသို့မဟုတ်စည်မှထွက်လာသောဘောလုံး၏အရောင်များသည်သင့်အားဘောလုံးများကိုဖယ်ရှားရန်မကူညီပါက၊ လှည့်ကွက်.
ရောင်စုံဘောလုံးထားပါ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရှိနှင့်ပြီးသားတူညီသောအရောင်တစ်မျိုး (သို့) အချို့ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမဟုတ်ပါ ဘောလုံးနှစ်ခုပေါ်မှာ နှင်းဆီပန်း ဒီပထမဘောလုံး အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မယ် အောက်ပါတို့အနက်သင်အရောင်ရပြီဆိုလျှင်သင်လိုအပ်သည် ကြောင်းအုတ်မြစ်ကိုချိုးဖျက်၎င်းပေါ်ရှိဘောလုံးအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။